Vaovao - Fantaro ny drafitra fandinihana hazavana Photometric
Rehefa eo amin'ny sehatry ny jiro tontolo iainana ianao ho toy ny mpanamboatra, mpamorona jiro, mpaninjara, na mpandrafitra mari-trano dia matetika mila manondro ireo rakitra planina fotometrika IES ianao hahafantarana ny tena fivoahan'ny jiro sy ny hery lumen ho an'ireo jiro tianao hapetraka ao amin'ny famolavolana. Ho antsika rehetra ao amin'ny indostrian'ny jiro ivelany, ity lahatsoratra ity dia eto hanampy antsika hahatakatra bebe kokoa ny fomba famakiana sy famakafakana ny sary fahazavana photometric.
Araka ny nambaran'ny Wikipedia tamin'ny teny tsotra indrindra ho firesahana amin'ny fahatakarana optika; Photometry no siansa amin'ny fandrefesana ny jiro. Ny tatitry ny famakafakana photometric dia tena dian-tanan'ny famantaran'ny jiro luminaire ny hazavany amin'izany famolavolana vokatra miavaka izany. Mba handrefesana ny zoro famoahana hazavana sy ny hamafiny (antsoina koa hoe candela na herin-labozia), manamarika ny famakafakana ny luminaire izay manome hazavana, dia mampiasa zavatra antsoina hoe Mironi Goniometer hanampy antsika hamantatra ireo lafiny samihafa amin'ny hazavana avoaka amin'ny heriny sy ny halaviran-dàlana mifandraika amin'ireo lamina napetrany. Ity fitaovana ity dia mitaky hazavana (candela) ary refesina amin'ny zoro isan-karazany. Ny elanelan'ny jiro mankany amin'ny Goniometer dia tokony ho 25 metatra na tsara kokoa raha te hanana refy marina amin'ny candela (hamafiny). Mba hiasa araka ny tokony ho izy ny fanadihadiana fotometrika IES dia manomboka amin'ny fandrefesana ny herinaratra na ny labozia amin'ny 0 degre isika (aotra ambanin'ny jiro na ny farany ambany). Avy eo isika dia mamindra ny goniometer 5 degre ary manohy mamindra azy hatrany hatrany, hafa 5 degre bebe kokoa isaky ny mandeha manodidina ny luminaire mba hamaky tsara ny fivoahan'ny hazavana.
FOMBA FAHAFANTARANA NY FAHAMARINANA FANAVALANA NY FARITRA FOTOTRA NY PHOTOMETRIC
Indray mandeha, rehefa lasa lavitra manodidina ny 360 degre, dia afindrantsika ny goniometer ary manomboka amin'ny zoro 45 degre avy eo amin'ny toerana nanombohantsika ary namerina ny fizotrany. Miankina amin'ny jiro famantaran-tany dia azontsika atao amin'ny lafiny samihafa izy io mba hisamborana tsara ny tena valin'ny lumen. Ny tabilao labozia, na ny fiolahana herinaratra labozia, dia namboarina tamin'io fampahalalana io ary ampiasaina amin'ny famoronana ireo fisie Iomet Photometric ampiasainay amin'ny indostrian'ny jiro ireo. Isaky ny zoro mazava isan-karazany dia ho hitantsika ny hamafin'ny luminaire izay matetika tsy manam-paharoa amin'ireo mpanamboatra jiro. Ny maodely fizarana maivana dia noforonina, antsoina koa hoe fiolahana herinaratra labozia, izay manome ny mpamorona jiro sy mpanao mari-trano sary an-tsary ny fahazavana aelin'ny luminaire amin'ny alàlan'ny optika sy ny lambam-paty ary ny endriny.
Arakaraky ny halaviran'ny halaviran'ny refy no halaviranay, vao mainka mihamafy ny fivoahan'ny hazavana. Ny latabatra fizarana candela dia ny fiolahana candela fa apetraka amin'ny endrika tabilaoro.
Ny sary hazavana photometric noforonina avy amin'ireo fikarohana ireo dia milaza aminao avy hatrany raha ny ankamaroan'ny flx (ny lumens, ny "fikorianan'ny hazavana") dia miakatra ambony na miolaka.
Ny latabatra fampiasana coefficient amin'ny photometry dia heveriny ny isan-jaton'ny jiro avy amin'ireo jiro mahatratra ny sehatry ny asa amin'ny habaka iray. Ny tahan'ny lavaka efi-trano dia ny tahan'ny rindrina amin'ny velarantany na gorodona amin'ny sehatry ny asa. Mitroka hazavana be ny rindrina. Arakaraka ny itondrany azy ireo no mahakely ny fahazavana hatrany amin'ireo faritra anaovan'ny jiro azy. Izahay koa dia manana sanda fitaratra taratra amin'ireo tabilao ireo izay mihevitra ny isan-jaton'ny fitaratra avy amin'ny gorodona, rindrina ary valindrihana. Raha hazo maizina ny rindrina izay tsy maneho taratra mazava dia midika izany fa tsy misy jiro kely kokoa hita taratra amin'ny sehatry ny asantsika.
Ny fahafantarana ny fomba fiasan'ity hazavana ity dia miasa ho an'ny vokatra tsirairay, mamela ny mpamorona jiro handamina tsara ny haavony hametrahana jiro sy ny elanelana eo anelanelan'ny jiro hanazava tsara ny habaka ivelany hamenoana io habaka io amin'ny hazavana zaraina mitovy. Amin'ity fampahalalana rehetra ity dia mamela anao (na rindrambaiko) misafidy mora foana ny habetsaky ny luminaires ilaina amin'ny drafitra tetikasa famolavolana jiro mahasoa indrindra amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny herinaratra wattage sy ny haavon'ny vokatra lumen hamoronana izany fandrakofana mazava izany mampiasa ny famaritana izay maneho ny ambaratongan'ny zoro hazavana izay hasehon'ny hazavana tsirairay amin'ireo sary an-tsorok'ireo mpanao mari-trano ho an'ny trano. Ireo fomba hamaritana ireo volavolan-jiro tsara indrindra sy ny drafitra fametrahana, mamela ireo matihanina sy mpikarakara fividianana tetik'asa lehibe hanara-maso tsara sy hahatakatra hoe iza amin'ireo jiro no tsara apetraka ao amin'ny faritra omena eo amin'ny drafitra fananana avy amin'ny arsitektara, miorina amin'ny fizarana maivana. miolakolaka ary manome fanazavana momba ny vokatra.
Drafitra FANOMPOANA FOTOTRA AN-TANINDRAZANA NY FANJAKANA NY ISAN'NY DIAGRAM
Lumens: Ny flux luminous, refesina amin'ny lumens (lm), dia ny totalin'ny hazavana vokarin'ny loharano tsy misy fijerena ny lalana. Ny flux luminous dia omen'ny mpanamboatra jiro ary ny soatoavina lumen mahazatra dia tafiditra ao amin'ny matrix jiro.
Candela: mamiratra ny hamafiny dia antsoina koa hoe ny famirapiratry ny mazava, refesina amin'ny candela (cd), dia ny haben'ny hazavana vokarina amin'ny làlana manokana. Raha jerena ara-bakiteny, ity fampahalalana ity dia natambatra ho tabilao misy endrika polar izay manondro ny hamafin'ny jiro isaky ny zoro lavitra ny 0 ̊ jiro axis (nadir). Ny fampahalalana isa dia azo alaina amin'ny endrika tabular.
Footcandles: Ny illuminance, refesina amin'ny footcandles (fc), dia refin'ny habetsaky ny hazavana tonga eo ambonin'ny. Ireo lafin-javatra telo misy fiantraikany amin'ny hazavàna dia ny hamafin'ny luminaire amin'ny alàlan'ny tampon-tany, ny halaviran'ny luminaire mankany ambonin'ny, ary ny zoro misy ny hazavana tonga. Na dia tsy azon'ny masontsika jerena aza ny jiro dia fepetra mahazatra ampiasaina amin'ny famaritana endrika.
aza hadino fa: Ny footcandles no refy fandrefesana matetika ampiasain'ny matihanina amin'ny jiro mba hikajiana ny haavo ao amin'ny orinasa sy ny habaka ivelany. Ny tongotra an-tongotra dia faritana ho toy ny hazavàna amin'ny metatra toradroa avy amin'ny loharano hazavana mitovy. Ny Illuminating Engineering Society (IES) dia mamporisika ireto fenitra manaraka jiro sy haavo an-tongotra ireto mba hiantohana ny fahazavana sy ny fiarovana sahaza ho an'ny olona.
Candelas / metatra: Ny luminance refesina amin'ny candelas / metatra dia ny habetsahan'ny hazavana mamela ravina. Izany no tsapan'ny maso. Ny Luminance dia hanambara bebe kokoa momba ny kalitao sy ny fampiononana ny volavola iray fa tsy ny fahazavana irery.
Power Beam Candle Center (CBCP): Ny labozia afovoany dia ny hamafin'ny hazavana eo afovoan'ny taratra, aseho amin'ny candelas (cd).
Cone of Light: Fitaovana ilaina amin'ny fampitahana hazavana haingana sy kajikajy, ny kôn'ireo hazavana dia manisa ny haavon'ny footcandle voalohany ho an'ny singa tokana miorina amin'ny teknika fikajiana teboka. Ny savaivony amin'ny boribory dia boribory amin'ny antsasaky ny tongotra akaiky indrindra.
Downlight: Ireo kodiarana hazavana ireo dia manome fampisehoana tokana tokana ary tsy misy taratra avy amin'ny sehatra. Ny angon-drakitra voatanisa dia ho an'ny haavon'ny fiakarana, ny sandan'ny footcandle ao amin'ny nadir, ary ny savaivony amin'ny valiny.
Jiro accent: Ny maodelin'ny hazavana avy amin'ny luminaires accent azo ovaina dia miankina amin'ny karazana jiro, wattage, fitongilan'ny jiro ary ny toerana misy ilay fiaramanidina manazava. Ny angon-drakitra fampisehoana tokana tokana dia omena ho an'ny fiaramanidina mitsivalana sy mitsangana, miaraka amin'ny jiro mihodina amin'ny 0 ̊, 30 ̊, na 45 ̊ kendrena.
Tanjon'ny hazavana beam: Ny kisarisary mikendry hazavana dia mamela ny mpamorona hisafidy mora ny elanelam-potoana mety amin'ny rindrina mba hahitana luminaire ary hahazo ny hazavan'ny jiro izay tiana. Ho fanaovan-jiro zavakanto amin'ny rindrina dia aleony mikendry 30 ̊. Amin'ity zoro ity, ny 1/3 amin'ny halavan'ny andry dia ho eo ambonin'ny teboka CB, ary ny 2/3 dia ho eo ambaniny. Raha misy halavany telo metatra ny sary hoso-doko, drafitra ny CB mba ho 1 metatra ambanin'ny tampon'ny sary hosodoko. Ho an'ny fampitomboana ny maodely ho an'ny zavatra telo-habe, jiro roa no matetika ampiasaina, jiro fototra ary fameno jiro. Samy mikendry ny haavon'ny 30 ̊ farafaharatsiny ary samy manana ny axis 45 ̊.
Data momba ny jiro amin'ny fanasana rindrina: Ny fizarana fanasana rindrina asymmetric dia omena karazana tabilao fampisehoana roa. Ny tabilao fampisehoana tokana tokana dia manamboatra ny haavon'ny hazavana amin'ny fidangan'ny tongotra iray metatra miaraka sy midina amin'ny rindrina. Ny tabilao fampisehoana singa marobe marobe dia mitatitra ny zava-bitan'ny singa afovoany nisaina avy amina lamina efatra. Ny soatoavina illuminance dia voafaritra eo afovoan'ny singa iray ary mifototra eo anelanelan'ny singa.1. Ny soatoavina illuminance dia soatoavina voahitsy cosine voalohany .2. Tsy misy fisaintsainana ety an-toerana mandray anjara amin'ny lanja fahazavana.3. Ny fanovana ny elanelam-potoana dia misy fiantraikany amin'ny haavon'ny hazavana.
NY HERIN'NY MARINA NY VAROTRA FAMARIHANA TANINDRAZANA VARIES
Ny fahatakarana ny fandrefesana sy ny famakafakana araka ny tokony ho izy ny jiro dia zava-dehibe hatrany amin'ny indostrian'ny jiro ivelany. Rehefa mampiasa jiro ho an'ny tetikasa lehibe isika dia tsy maintsy manomana lavitra ihany koa ary mahatakatra fa mamolavola tsara ny drafitry ny jiro isika mba hanampiana antsika hahafantatra mialoha mialoha ny fotoana, ireo jiro hapetrantsika aiza, ary firy no hapetraka amin'ny halavirana sasany hahazoana ny rakotra hazavana mety. Izany no mahatonga ny Garden Light LED ny satrokay mankany amin'ny laboratoara fanaovan-jiro, injeniera IES ary ny fenitra Intertek ho an'ny jiro fanamafisam-peo ambany izay mikendry ny hanome ny indostria famakiana marina ho an'ny fandrefesana hazavana avo lenta ary hanome anay angona azon'ny matihanina ampiasaina. mamorona endriny jiro mahomby kokoa raha mandray fanapahan-kevitra mividy marani-tsaina kokoa.
Raha miantsena amin'ny jiro eny an-kalamanjana ianao dia mamporisika anao foana ny hijery ireo mpivarotra hafa mody mpanamboatra milaza vokatra avo lenta amin'ny vidiny ambany, satria ao amin'ny toeram-pitsaboana fotoam-pitsarana, ireo jiro hafa hafa avy amin'ny jiro volon-tany ambany hafa ireo marika any Etazonia sy any ivelany, dia latsaka ambany noho ny voalaza voatondro nataony ary mitaky fitakiana famoahana maivana miaraka amin'ireo vokatra mora nohafarana azy ireo.
Rehefa mitady ny jiro tsara indrindra eny an-toerana ianao dia miarahaba anao izahay hifandray aminay ary faly izahay mametraka ny iray amin'ireo jiro tarihinay maodely matihanina eo am-pelatananareo hitarika fampitahana amin'ny tontolo tena izy!